KuMel – Volunteer Connection
Becomeavolunteer Select the category you want to work in and look for vacancies. Contact us What can we do for the people
and planet? And how can we help? We are proud to help you to contribute your precious time to the community.
Where would you like to contribute your precious time? Just contact KuMel. Contact us What is the meaning of "KuMel" KuMel သည် မြန်မာလို “ကူညီမယ်” ၏အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး
အင်္ဂလိပ်လို “We will help” ဖြစ်သည်။ Contact us
ထိရောက်သောအပြုသဘောလှုပ်ရှားမှုမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အချိန်မှန်၊ နေရာမှန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်နဲ့ ဒီနေရာကိုသင်ရောက်လာတာပါ။ လူမှုပတ်၀န်းကျင်ကိုကူညီဖို့ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ အတူပါဝင်ကူညီမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအကြား ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လိုကူညီ ထောက်ပံ့နိုင်မလဲ
လိုအပ်သည့်အချိန်၊ လိုအပ်တဲ့နေရာများအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်လိုက် ပါ။
ဇွန် 5, 2020
~ ငွေကြေးမဲ့အလှူ ~
~ ငွေကြေးမဲ့အလှူ ~ ********** အိုင်အမ် ဘာဘီဂဲလ် အင်မိုင် ဘာဘီဝေါ (ဖုန်းလာသံ) …… ….. ဟဲလို.. ဟုတ်ကဲ့အန်တီ .. ဟုတ် လှူလို့ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ခုချိန်က ရုံးမှာမို့ ထွက်လာလို့ မရသေးဘူးရှင့်….. ...